Namoonni dhibbootaan lakka’aman waraans Bilxiginnaa fi Naannoo Tigiraay - Kichuu
[ November 29, 2020 ] Humanity is enough to stand with Tigrai people at this time!	Africa
HomeAfaan OromooNewsNamoonni dhibbootaan lakka’aman waraans Bilxiginnaa fi Naannoo Tigiraay
Namoonni dhibbootaan lakka’aman waraans Bilxiginnaa fi Naannoo Tigiraay
Namoonni dhibbootaan lakka’aman waraans Bilxiginnaa fi Naannoo Tigiraay gidduutti adeemsifamaa jiruun ajeefamuu akkasumas ammoo waraanni biyyattii Kumaan lakka’aman biyya ollaa Sudaaniitti baqachuu Reuters dabalatee miidiyaaleen biroo gabaasan.
Waraanni waliinii biyya Itiyoophiyaa keessatti baname torban guutuuf kan adeemu yoo ta’u, gama mootummaa biyyattiifi Tigiraayiin waraanni adeemsifamaa jiraachuu malee, qisaasama qaqqabaa jiru ilaachisuun wanti gabaafame amma ammaatti hin jiru.Haa ta’u malee, miidiyaallen gurguddoo danuun fuula isaanii gara Itiyoophiyaatti deebifachuun, maqaa biyyattii toora Oduu Jajjabaa (hard news) keessatti irra deddeebiin kaasaa jiru.
Akka CGTN gabaasetti, waraana hanga ammaatti adeemsifamaa jiruun, namoonni dhibbaan lakkaa’aman lubbuun isaanii irbaata rasaasaa taateetti. Waraana mootummaa biyyattii lammii ofiitti hin dhukaasnu jedhan kanneen baayyinaan kumaan lakkaa’amanii hidhannoosaanii waliin biyya ollaatti baqachuun gabaafameera.
Reuters gabaasa Onkoloolessa 11 qondaalota mootummaa Sudaan wabeeffachuudhaan qabatee ba’een, miseensi waraana Raayyaa Ittisa Biyyaa lolicha baqachuudhaan gara Sudaanitti baqatan baayyachaa jiraachuufi uummata sababa waraanaan qe’eesaarraa buqqa’ee daangaa Sudaan cabsuun garasitti baqachaa jiru dabaluun guyyoota lamaa booda kuma dhibba lama ta’uu akka danda’u tilmaamamuusaa addeesse.
Waraana Bilxiginnaafi Mootummaa Naannoo Tigiraay gidduutti banameen, hanga ammaatti lubbuufi qabeenyaan barbaada’e hagam akka ta’e gama mootummaa Itiyoophiyaatiin wanti ibsame hin jiru.
#Share godhaa waliin gahaa!
[Sadaasa 10,2020 #Odeessa_Keessaan_Dhufe!]
“ወደ ጦር ግንባር!/GARA ADDA WARAANAA” Coloneel Mangistuu Hayilamaaram/Militarii Juntaa(Military Junta)
#Oromoo Guurii Gurraa guuradhuu dhageeffadhu! Daba guddatuu ummata keenya irratti deemaa jira. Ammas #military_junta biraa sitti dhalate.
Guyyaa har’aa odeessa keessaan na dhaqqabeen Kibba Baha Oromiyaa Godina Arsii Lixaa Ona Adaabbaa Gandoota 37 keessa deemuun Kaabinee fi Kaadireen Paartii Badhaadhinaa (PP) #Qeerroo_Dargaggoota Oromoo hoji dhabeeyyii fi Lafa dhabeeyyii akkasumas Loltoota sirna Dargii keessaa galan galmeessuun, ” lafa mana irratti ijaarattan Kaaree 200 isinii kenninaa, Qarshii ammoo 2000-5000 Mindaa Isinii Kaffallaa #Wayyaanee Biyya Keenya Ethiopia Weeraraa Jiru Of Irraa Qolannaa, Dirree Leenjii Waraanaa Deemtanii Leenjii isin barbaachisu xumurachuun Adda Waraanaa Deemtanii Akka Abboota Keenya Duriitti Diina of irraa deebisuu qabana!” Jechuun Galmeessaa jiru.
Sirna Abbaa Irree Nugus Jaanooy; Hayla Sillaasee Kuffisuun Abbaan Irree Socialist 1966-1983 Akka Lakkoofsa Habashaatti Waggoota 17f Umattoota biyyatti Humnaan Adda Waraanaatti guuruun isa mormii dhageesisu ammoo ቀይሽብር irratti raawwachuun Boolla Tokkotti Rashanaa ture, akka walii galaatti Ummattoota humnaan cafaqaa Bulche sirni Dargii Coloneel Mangistuu Haylamaaramiin durfamu Xumura irratti akka hin deebinetti diigamee bade.
Baruma Dargiin badu 1983- 2010 akka lakkoofsa Habashaatti Waggoota 27f EPRDF/TPLF/OPDO n Afaan Qawweetiin Ummata cafaqanii bulchaa turan. Maqaa Jijjiiramaan of moggaasee kan as bahe Team Lammaa/ODP/PP n 2010-2013 ttii Sobaa fi Sossobaan Abbaa Irree Hiriyyaa hin qabne ta’ee hidhaa fi ajjaaechaan dhaloota lafarraa kan kute, Sirni Badhaadhinnaa Waggoota 30n booda #colonel_mangistuu_Haylamaariyamitti Aanuun #military_junta 2ffaa ta’ee kunoo, “ወደ ጦር ግንባር!/GARA ADDA WARAANAA” Jechuun #Sirni Badhaadhinaa #Coloneel Abiyyi Ahimadiin durfamu /Militarii Juntaa(Military Junta) ta’eera.
Oromoo Boolla tokko keessatti Lama hin ciniinamin. “ወደ ጦር ግንባር!/GARA ADDA WARAANAA” jechuun Militarii Juntaa(Military Junta)n lama si hin ciniininii dammaqi!